Iprofayile ye-LinkedIn kunye nokuSetyenziswa | Martech Zone
NgeCawa, ngoJulayi 10, 2011 NgoLwesithathu, Oktobha 26, 2011 Douglas Karr
Ngomsebenzisi omtsha ongezelelweyo ngomzuzwana, ixabiso le-LinkedIn liyakhula kuphando lomntu olunxulumene neshishini. Mhlawumbi enye yezibalo ezinomdla kukuba i-40% yama-500 kuvavanyo yathi khange banqakaze kwisibhengezo se-LinkedIn ngelixa i-60% yabasebenzisi bebonke besithi banayo kwaphela. Ngabasebenzisi abazizigidi ezili-100 kunye nokukhula, kunokubakho izibonelelo kwamanye amashishini okutyala imali kwintengiso ye-LinkedIn-ndinomdla wokuba amava akho abe njani.
Ngokutsho Lab42 iwebhusayithi: ILab42 yeyona ndlela ilula yokwenza uphando lwentengiso yabathengi kwi-intanethi usebenzisa iinethiwekhi zentlalo. Nokuba uyila isaveyi ekwi-intanethi ngesixhobo sethu sokwenza uphando okanye siyayenza, uLab42 ufumana abaphenduliyo kuphando lwakho kwaye azise iziphumo kwiintsuku ezi-3 ukuya kwezi-5 zomsebenzi. Senza konke oku nge $ 500 ukuya kwi- $ 1,000. Kulungile- $ 500.
Ngokoluvo lwam, akukho zimanga zivela kolu phando kunye ne-infographic evela Lab42. Nangona kunjalo, unokuba unqwenela ukugcina inethiwekhi ephezulu yengqondo kwixesha elizayo xa unqwenela ukuvavanya intengiso ethile ehlawulelweyo.
Jul 10, 2011 ngo-4: 01 PM
Yithande! Oku kuqinisa inkolelo yam yokuba abantu abaninzi basebenzisa i-LinkedIn rhoqo kunendlela esinokucinga ngayo. Ndicinga ukuba uninzi lweengcali zeshishini ezinjengeLinkedIn ngaphezulu kwezinye iinethiwekhi kuba ayiqulathanga yonke "i-junk" kunye nengxoxo enazo ezinye iinethiwekhi. I-LinkedIn iyaqhubeka nokuba yeyona ndawo ndiyithandayo yesibini yenethiwekhi social